प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग ! - Khabar Nepali
होमपेज / अन्तर्राष्ट्रिय / प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग !
प्रहरी श्रीमानले ‘मैले उसलाई भुल्न सकिन’ भन्दै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेकै ठाउँमा गरे प्राण त्या ग !
आइतबार, भदौ ०६, २०७८
२ महिना पहिले विवाहको बन्धनमा बाँधिएका यी दुई श्रीमान् श्रीमती एक अर्कालाई धेरै माया गर्थे। गाउँलेहरुका अनुसार श्रीमतीको असामयिक मृत्युबाट दुखी प्रहरी पति हरेक दिन अन्तिम संस्कार गरेको स्थलमा गएर आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झेर रोए। हरेक दिन जस्तै, बुधवार पनि मनीष अन्तिम संस्कार स्थल पुगे र रुन थाले। केही समयमै उनले त्यहाँ रहेको बबुलको रुखमा झु ण्डि एको फेला परे । त्यस अघि, उनले आफ्नो भाइलाई व्हाट्सएप मा एक नोट पठाए।
भारतमा चार व’र्षीया आ’फ्नै बहि’नीलाई ब,’ला’त्का’र गर्ने नेपा’लका युव’कलाई फाँ,’सीको स,’जाय !
विद्यालय खुले पनि शिक्षकहरूलाई विद्यालय आउन नदिइने
अभिभावक कक्षा कोठामा पस्दा ४ कक्षाकी बा’लिका माथि प्रधानाध्यापकले गरेको यस्तो हर्कत प्रत्यक्ष देखे
बला’त्कारपछि ह’त्या आ’रोपीको टाउ’कोको मू’ल्य १६ ला’ख, म’न्त्रीले भ’ने ‘इन्का’उन्ट’र ग’र्छौं’
अमेरिकनहरुले ओहायोमा यसरी मनाए जनैपूर्णिमा
७.विष्णु माझी र भुन्टिले सँगै खेले यस्तो भिडियो, भिडियो भयो भाइरल
८.यौ,न सम्पर्क गर्दागर्दै झ्यालबाट खसिन् युवती, पार्किंग गरेर राखेको गाडीको छत नै भाँचियो (भिडियो)